एउटी महिलाको जि’द्दीको अगाडि हार्‍’यो चीनको सरकार ! देखियो अनौठो दृश्य [ तस्बिर सहित ] – Sanchar Patrika
एउटी महिलाको जि’द्दीको अगाडि हार्‍’यो चीनको सरकार ! देखियो अनौठो दृश्य [ तस्बिर सहित ]
काठमाडौं। चीनको गुआंगडोंग प्रान्तकी एक महिलाको जिद्दीको अगाडि चीनको सरकार हा’रेपछि अहिले त्यहाँ निकै अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ । प्रान्तमा एउटा फास्ट लेन राजमार्ग छ जसको बीचमा एउटा घर छ जुन घर देख्दा मानिसहरु चकित पर्छन् । यो घरकी मालिक एक महिला हुन् जसले राजमार्गमा तीब्र गतिमा गुडिरहेका गाडीहरुको ठिक बीचमा रहेर आफ्नो जीवन बिताइरहेकी छिन्।
द सनको रिपोर्टअनुसार ती महिलाको घर यहाँ राजमार्गको निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै थियो । सरकारले राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा उनको घर हटाउन चाह्यो तर महिलाले मानिन् । सरकारले ती महिलालाई त्यहाँबाट हटाउन निरन्तर १० वर्षसम्म प्रयास गर्यो तर ती महिला आफ्नो अडानबाट पटक्कै पछि हटिनन् । अन्ततः १० वर्षको प्रयासपछि सरकारले हार मान्यो । महिलाले त्या ठाउँ छाड्दै नछाड्ने र त्यहीँ बस्ने अडान लिएपछि सरकारले महिलाको घर नहटाइ राजमार्ग निर्माण गर्ने विकल्प रोज्यो।
सरकारले घरको चारैतिर राजमार्गको पुल निर्माण गर्यो र घरलाई त्यहीँ रहन दियो । अहिले महिला गाडीहरुको बीचमा आफ्नो जीवन बिताइरहेकी छिन् । महिलाले राजमार्ग बन्नुभन्दा अगाडि १० वर्षसम्म घर बेच्न अस्वीकार गरिरहिन् । सरकारले उनलाई दिन चाहेको मुआब्जा लिन पनि अस्वीकार गरिरहिन् । उनको यो १ तले घर ४० वर्गमिटरको छ । ग्वांडोंग टिभी स्टेशनका अनुसार यो घर ४ लेन ट्राफिक लिंकको बीचमा एक खाल्डोमा छ।
यो घरकी मालिक महिलाको नाम लिआंग हो । रिपोर्टअनुसार सरकारले उनलाई यहाँबाट हटाएर कुनै आदर्श स्थानमा राख्न नसकेकोले यी महिला यहाँबाट हट्न अस्वीकार गरेकी हुन् । उनले भनिन् ‘तपाइँलाई लाग्न सक्छ यहाँको माहोल खराब छ तर मलाई लाग्छ कि यो शान्त, मुक्त, सुखद र आरामदायक छ ।’ उनका अनुसार उनी आउने परिणामसँग जुध्नको लागि खुसी थिइन् र अरुले आफ्नो बारेमा के सोच्छन् भन्ने चासो दिँदैनथिन्।
Prevवडाअध्यक्षको सम्पर्कमा रहेका १९ जना कोरोना संक्रमित
Nextपोखराका यि युवा कृषकको फार्ममा छन् ७०,८० केजीका सप्रेका बाख्रा, बाख्रा बेचेरै गर्छन् मनग्य आम्दानी